Akwazi ukugcina – Isigaba – Windows – Vessoft
Akwazi ukugcina – Windows
English, Українська, Français, Español... Easeus Partition Master 11.9 Professional futhi Free
Akwazi ukugcina Ithuluzi ukusebenza nge-hard drive nezinye izinto ezithwala idatha. Isofthiwe umsebenzi ukufihla futhi sibonise ulwazi disk.
English, Українська, Français, Español... WinToFlash 1.4.0000 beta Lite, Home, Professional futhi Business
Akwazi ukugcina Isofthiwe ukubuka ulwazi olugcwele mayelana nesakhiwo ifayela a hard disk nokwandisa isikhala disk. Isofthiwe inikeza ezahlukeneyo eziningana ukubonisa izinhlaka okuqukethwe kwi disk.
English, Français, Español, Deutsch... AOMEI Backupper 4.0.2 Standard futhi Professional
English, Français, Deutsch, 中文... DVDFab 10.0.1.9
Akwazi ukugcina Isofthiwe ukukopisha DVD ngaphandle ukulahlekelwa izinga. Futhi isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi cindezela, susa futhi ukuguqula okuqukethwe oshayelayo.
Akwazi ukugcina The instrument ukuba defragment idrayivu kanzima futhi amafayela ahlukene. Lokhu kuhlolwa software futhi ubonisa ulwazi mayelana disc.
Akwazi ukugcina Isofthiwe ukugijima izithombe disk ngaphandle kokusebenzisa idrayivu optical. Isofthiwe kudala oshayelayo virtual ukuthi ncamashí ngokomzimba CD noma DVD oshayelayo.
Akwazi ukugcina Isofthiwe ukuhlola isimo kanye nezinga kanzima oshayelayo operability. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana izinkomba ezahlukene yomsebenzi izindilinga eziyizicaba.
Akwazi ukugcina Isiqophi converters An lula ukusebenzisa isofthiwe ukuguqula video ibe DVD format. Isofthiwe ine amathuluzi ukuze uhlele bese ulungise izilungiselelo amafayela video.
Akwazi ukugcina Ukubethelwa Isofthiwe inhlanganisela yezimpawu elikhulu amathuluzi ukufaka ikhowudi kwimininingo yonke. Kukhona kungenzeka ukufaka ikhowudi kwimininingo yonke okuqukethwe the angaphandle kanzima kanye nezinye izinto ezithwala idatha.